Sunday December 13, 2015 - 18:41:27 in Wararka by Hassan Liisho
Magaca barnaamijku wuxuu ahaa Lyfta Blicken oo macnaheedu yahay ''Kor milicso ama Jalleecada kor u qaaad'' wuxuuna ku wajahnaa dhallinta dalka ku cusub iyo sidii ay u heli lahaayeen kaalmada ay u baahan yihiin. Da' yartu waxay qaadanayeen mudadaas kooban casharro la xiriira qaabkii ay dalkan ula qabsan lahaayeen iyagoo niyad wanaagsan qanaaco iyo xiiso u haya higsiga iyo wax ka noqoshada dalkan.
Dhallintu waxay la kulmeen kana dhageysteen warbixino kala duwan qaybo ka kala socday bulshada rayidka, siyaasiyiin, dhakhaatiir, bareyaal Iwm. iyagoo tusaale ku dayasho mudan ka kororsaday goobtaas.
Hadaba goor-sheegtadu markay ahayd 15.30 ayaa la soo buux-dhaafiyey goobtii loo madlay in ay xafladdu ka dhacdo. Waxaa si habsami leh soo dhawaynta u daadihinayey isla da'yartii koorsada soo dhamaysatay oo lab iyo dheddigba leh, iyagoo ku labisnaa dharka lagu yaqaan ee uu hiddaheenu caanka ku yahay. Waxaa ugu horrayn xafladda daah furay gudoomiye ku xigeenka Ururka UMIS ahna sii hayaha xilka gudoomiyaha Maxamed C/kariin Faarax. Ka dib waxaa la guda-galay xafladdii oo ku billaabatay jawi daggen, dhallintuna waxay goobta ku soo bandhigeen goos-goos iyo maad ay aad ula dhaceen isla markaana ka qoslisay dadweynihii goobta isugu yimid.
Ugu dambayn waxaa halkaa hadallo kooban ka soo jeediyey qaar ka mid ah Marti-sharaftii goobta isugu timid oo ay ka mid ahaayeen: Mursal Ciise, Kalla Hoy, Jan Olof iyo Maxamed Maxamuud Guure(MMG) oo ka mid ahaa aasaasayaashii ururka UMIS isagoo daah-furay Mashruuc cusub oo la magac baxay ''Värna om din främtid'' Daryeel mustaqbalkaada; kaasoo uu Ururku ka hawl-geli doono dhawaan Idanka Eebe.